Home Wararka Beesha Waceeysle oo Gal-mudug 3-af wax uga raadineeyso & Go’aan cad
Beesha Waceeysle oo Gal-mudug 3-af wax uga raadineeyso & Go’aan cad
Doorashadda dhawaan la filaayo in ay ka dhacdo Magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta Maamulka Gal-mudug ayaa waxaa isku haaya shaqsiyaad siyaabo kala duwan u ololeeynaayo,kuwaasi oo qaarkood ku kala daaban Dowladda iyo Xisbiyo mucaarad ah Waloow ay jiraan musharaxiin aan cidna ku daabneeyn oo iyagu gooni u socda.
Kuraasta loolanka adag geli doonta waxaa ka mid ah kursiga Gudoomiyaha baarlamaanka Gal-mudug kaasi oo ay doonayaan sedax shaqsi oo saameeyn xoogan leh waxaana ka mid Maxamed Nuur gacal oo Villa soomaaliya ay wadato si C/naasir Aadan Cusmaan oo aad looga cabsi qabo in uu booskaasi hanto,sidoo kale Cabdullaahi shiine ayaa isna ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay Gudoomiye Baarlamaan.
Dad badan ayaa aaminsan in beesha waceeysle oo Sedax musharax ku leh Musharaxiinta u taagan qabashada xilalka Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo madaxweynaha in ay u midoobeen soo dhicista xaqooda horay loo duudsiyay.
Gen Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo kasoo jeeda Ceel-dheer ayaa ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweyne,waxaana uu ka mid yahay shaqsiyaadka looga cabsi qabo,taas oo ka dhigan in Waceeysle uu markaani rabo in loo dhiciyo xaqiisa.
Dhanka kale Gudoomiayaha Baarlamaanka shaqsiyaadka u taagan ayaa iyagana waxaa la aaminsan yahay in ay saameeyn siyaasadeed ku leeyihiin Gal-mudug,waxaana si aad ah uga baqanaayo Villa Soomaaliya oo wadata musharax u gaar ah.
Tan ayaa ka dhigan in beesha waceeysle ay hanan karto mid ka mid ah xilalka labada ah ee sare,taas oo ay markaan usoo qalab qaateen helideeda.